A na-atụle atụmanya nke injinịa ugbo na ihe ngosi Zolotaya Niva - Potato System Magazine
Isi News Ihe omume
в Ọkwa, News, Akụkọ mpaghara, Ihe omume, Omume / Etu, Injinia / Teknụzụ
Ihe ngosi a na-eme na mpaghara Ust-Labinsk nke Krasnodar Territory. Ihe dị ka ndị na-emepụta ngwá ọrụ 400 sitere na Russia na mba ndị ọzọ na-ekere òkè na ya, ọrụ mgbasa ozi nke Ministry of Agriculture Russia na-akọ.
Osote Gọvanọ Andrey Korobka, onye isi ngalaba na-emepụta ihe ọkụkụ, Mechanization, Chemicalization na Protection Plant nke Ministry of Agriculture nke Russia Roman Nekrasov, onye isi oche nke Kọmitii WGW maka mmepe nke Agro-Industrial Complex na nri, gara emume mmeghe ahụ. Sergey Orlenko.
Andrey Korobka kelere ndị bịaranụ n'aha Gọvanọ Veniamin Kondratiev wee chọpụta na ọbụna n'okpuru ọnọdụ mmachi, ndị ọrụ ugbo Kuban na-aga n'ihu na-emeziwanye ụgbọ mmiri ha na-arụ ọrụ ugbo. Kemgbe mmalite nke afọ, a zụrụ ihe karịrị otu puku nkeji nke igwe ọrụ ugbo dị iche iche na ego nke 5 ijeri rubles.
“A na-azụta ígwè ọrụ ugbo ruo ọtụtụ afọ na-abịa, ọ dịkwa mkpa ka ndị ọrụ ugbo ghọta otú ihe mapụtara, nrụzi na nrụzi ga-esi dị ọnụ ala n’ọdịnihu. Ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ ndị sonyere na ihe ngosi Zolotaya Niva na-enye ha obi ike n'okwu a. Enwere nnukwu akụrụngwa ụlọ ebe a, nke na-adịchaghị ala karịa mbubata,” Andrey Korobka kwuru.
Onye isi ochichi ahụ gbakwụnyere na mpaghara ahụ na-agbasawanye mmekorita ya na ndị na-arụ ọrụ igwe si Belarus, bụ ndị ngwá ọrụ ha na-achọsi ike n'etiti ndị ọrụ ugbo Kuban. E gosikwara ihe atụ ya kacha mma na ihe ngosi ahụ.
Sergei Orlenko kelere ndị ọbịa na ndị sonyere ihe ngosi ahụ n'aha onye isi ụlọ omeiwu mpaghara, Yuriy Burlachko. O kwusiri ike na n'okpuru ọnọdụ ọhụrụ ahụ, usoro maka ngbanwe mbubata bụ usoro kwụsiri ike na amụma akụ na ụba Russia.
"Ihe ngosi agro-industrial na-enye ohere pụrụ iche izute ndị nnọchiteanya nke ngalaba ọrụ ugbo n'otu saịtị. Na afọ iri abụọ nke ahụmahụ nke ndị nhazi na-eme ka Zolotaya Niva bụrụ ebe a na-akwalite mmepụta ihe ọhụrụ nke ugbo, na-achọ ndị mmekọ ma gbasaa ọdịdị ala nke ọnụnọ nke azụmahịa agrotechnical, "Sergey Orlenko kwuru.
Enwere mmemme gọọmentị etiti na mpaghara mpaghara maka ịzụrụ igwe ọrụ ugbo na mpaghara Krasnodar. N'afọ a, ewebatala ọkwa nkwado steeti ọhụrụ n'ụdị ịkwụ ụgwọ maka ndị ọrụ ugbo maka 10% nke ọnụ ahịa ịzụrụ akụrụngwa ugbo sitere na ndị na-emepụta Kuban. E kenyere 40 nde rubles maka ebumnuche ndị a.
Ihe ngosi XXII Agroindustrial ga-aga ruo Mee 27. Ihe ngosi nke igwe ọrụ ugbo pụrụ iche, ihe omume azụmahịa maka mmepe nke mpaghara agro-industrial complex na-eme atụmatụ.
isi: Press Service nke Ministry of Agriculture nke Russia
Tags: Golden Niva-2022Krasnodar regionOzi nke Ọrụ Ugbo nke Russian FederationAgricultural engineeringUsoroteknụzụ
Ukraine ga-edekọ akụkọ ihe mere eme maka mbupụ ụyọkọ nduku na oge 2020/21
Ntinye aka nke Michurinsky GAU na mmemme steeti maka mmepe nke nhọrọ na mkpụrụ mkpụrụ nduku na Russian Federation